SomaliaReport: R/Wwaasaraha Al-Shabaab Nabad ugu Baaqay
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Abdiweli Maxamed Cali ayaa ugu baaqay fallaagada al-Shabaab inay la wada xaajoodaan Dawlada Ku meel Gaarka (DKMG) si collaada nabad loogu soo afjaro.
Arrintani waxay kusoo aadantay xilli uu madaxweynaha Soomaaliya dhaleeceeyey xadgudubka Keenya ku samaysay xuduuda Soomaaliya iaydoo la dagaalamaysa fallaagooyinka.
“Waxay tahay xilligii ay al-Shabaab muhimada siin lahayd baahida nabada iyo la xaajoodka dowladda. Waxaan diyaad u nahay wada xaajoodkaas aan ku xallinayno dhibaatada dalka ka jirta iyo dib usoo celinta nabada iyo deganaanshaha,” ra’iisul wasaaraha ayaa ka yiri shir ay isugu yimaadeen ururada bulshada iyo xukuumada Gobalka Banaadir.
Ra’iisul Wasaarahu ma cayimin madasha iyo waqtiga wada hadallada nabadeed bilaabanayaan.
Wuxuu sheegay in al-Shabaab lugu wiiqay dagaaladii ugu danbeeyey ee dhamaan goballada koonfurreed ee dalka, marka lagu daro caasimada Muqdisho.
“Al-Shabaab waa inay eegto xaalada ay maanta ku sugantahay ayna ogolaadaan wada hadal. Dhawaan Mukhtaar Roobow, oo ah hoggamiyayaalka al-Shabaab, ayaa yiri dadku waa inay cafiyaan khaladaadka ay ka galeen. Waxay garoowsadeen danbiyada ay dadka ka gakeen,” ayaa Cabdiweli Maxamed u sheegay Somalia report.
Tan oo kusoo hagaagtay xilli ay ciidamada dowlada ku wajahan yihiin goobaha al-Shabaab ka taliso ee furunada koonforta iyo caasimada.
Sidoo kale, ciidamada Keenya ayaa weeraro circa iyo dhulka ah ku qaaday gobalka Jubbada Hoose, qalcadda ugu xoogan ee al-Shabaab.